Serivisy fanaraha-maso ny trano any Etazonia
Fahadisoam-panatanterahana be loatra raha misafidy mpanara-maso trano dia ny fisafidianana ny inspecteur bobongolo Los Angeles dia mahazo ekipa mpanara-maso tsy voasoratra anarana na tsy nahazo alalana. Tsy isalasalana fa ny tsirairay dia manana fahaizana mijery ny trano, kanefa, inspecteur matihani...
Navoakan'i Richard Perez
View Serivisy fanaraha-maso ny trano Published 4 years ago
Ny fisafoana trano dia fandinihana voafetra ary tsy misintona ny toetry ny trano, izay matetika mifandraika amin'ny fivarotana io trano io. Ny fisafoana trano dia matetika tarihin'ny inspektera tokantrano izay manana ny fiofanana sy ny fanamarinana hanatontosana ny fisafoana toy izany. Manomana sy manolotra azy ireo ho an'ny mpanjifa ny tatitra momba ny valiny. Ny mpanjifa avy eo dia mampiasa ny fahalalana azo mba handraisana fanapahan-kevitra momba ny fividianan'izy ireo trano. Ny inspekterina an-trano dia mamaritra ny toetoetran'ny tokana amin'ny fotoana anaovana ny fisafoana saingy tsy manome antoka ny ho avy, ny fahombiazana na ny fanantenan'ny rafitra na ny singa-miasa.  Indraindray dia misavorovoro ny tompon'andraikitra iray ao an-trano indraindray. Ny inspektera iray an-trano no mamaritra ny toeran'ny trano iray, fa ny mpanavola no mamaritra ny sandan'ny fananana iray. Any Etazonia, na dia tsy ny fanjakana na ny monisipaly aza no mifehy ireo inspektera ao an-trano, dia misy fikambanan'ny matihanina isan-karazany ho an'ny inspektera amin'ny trano izay manome fampianarana, fiofanana ary tambajotra amin'ny tambajotra. Ny fisafoana trano trano matihanina dia ny fizahana ny toetran'ny trano ankehitriny. Tsy fisavana natao hanamarinana ny fanarahana ireo fehezan-dalàna mety; Ny fanaraha-maso ny fanorenana dia fiteny matetika ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny code code any Etazonia. Ny fanaraha-maso mitovitovy saingy sarotra kokoa amin'ny fisainan'ny trano ara-barotra dia tombana amin'ny fizahana fananana. Ny fisafoana an-trano dia mamaritra ny olana fa ny fanamboarana diagnostika dia ahafahana mahita vahaolana amin'ny olana hita sy ny valiny mialoha.